Creative Christmas ၏ ၁၂ ရက်နေ့ 12 | NAB သတင်းများ | 2019 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » Creative Christmas 12 ၏ 2019 နေ့ရက်များ
ဒီခရစ္စမတ်ရာသီမှာအားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်တဲ့သူတိုင်းရှိတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့မြင့်မားသော caliber နည်းပညာ nerds များပင်လျှင်ပျော်ရွှင်စရာခရစ္စမတ်ပွဲတော်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အားလပ်ရက်အစဉ်အလာနှင့်အညီနေထိုင်ရာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှခရစ်စမတ်ချစ်သူများအားကျွန်ုပ်မေးမြန်းခဲ့သည်။ “ ဒီခရစ်စမတ်ပွဲလေးကိုဒီခရစ်စမတ်ပွဲမှာသင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ” နည်းနည်းကံကောင်းခြင်းနှင့်မဲပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်းပျော်မွေ့ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ကစားစရာစာရင်းကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ကောင်းသော St. St. Nick ဟောင်းသည်လူအုပ်ကို ၀ င်တိုက်ပြီးလူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးခြယ်မှုများကိုကူညီပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အကြွေးအားလုံးကိုယူရန်မရည်ရွယ်ပါ။ မှန်တယ်၊ မတူညီတဲ့ပစ္စည်း ၁၂ ခု - တစ်ခုစီကတစ်ရက်စီပဲ။
၎င်းသည်ပျော်ရွှင်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့သားသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းရန်အတွက်ဤကဲ့သို့သောကစားစရာကစားစရာများလိုအပ်သည်ကိုမငြင်းနိုင်လောက်အောင် (နှင့်သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီသော) အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သင်ဤပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ခရစ်စမတ်၏ 1st နေ့တွင် RØDECaster Pro Podcast ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုpodcasting ကိုလွယ်ကူစေသည်။ ငါလွယ်လွယ်ကူကူပြောတဲ့အခါ, အဲဒါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် လွမ်းဆွတ်ခြင်း! အဆိုပါ RØDECaster Pro podcasting မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးထွားလာအစိတ်အပိုင်း။ ဒီအားလပ်ရက်ရာသီ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေး podcasts တွေကိုဖန်တီးဖို့သင့်ရဲ့အိပ်မက်ဟာဒီအစွမ်းထက်တဲ့ပလက်ဖောင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်ရာသီသည်သင်၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည်ထက်အဘယ်အရာကပိုကောင်းစေသနည်း။ The RØDECaster Pro အဆင့်တိုင်း၏ podcasters များအတွက် All-in-one စတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခရစ်စမတ်၏ 2nd နေ့တွင် JVC Cam GY-HC900 နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်ထူးခြားတဲ့အရာ နှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်လွှင့် camcorder ။ ဘာကြောင့်လဲသိချင်လား ဆက်ဖတ်ပါ ဒီကင်မရာဟာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာရုပ်ပုံအရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုမရှိတဲ့အပြင်တခြားနေရာကိုမတွေ့နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအဆက်အသွယ်ကိုပေးနိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်အမည်တွင်“ ချိတ်ဆက်ထား” သည့်စကားလုံးကိုဘာမျှမပါရှိခဲ့ပါ။ The JVC Cam GY-HC900 နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်2/3လက်မအရွယ် CMOS image sensor သုံးခုပါ ၀ င်ပြီးမြင့်မားသော sensitivity၊ ဆူညံမှုနိမ့်ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သော dynamic range များကိုပို့ပေးသည်။ ဒီချိတ်ဆက်ထားသောကင်မရာသည်စွမ်းအားကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်အသစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ သတင်း - ကျော် IP အဖြစ်မှန်။ စန်း!
ခရစ်စမတ်၏ 3rd နေ့၊ CineLight 480 စူပါ Quad မှ Fluotec, အမြဲတမ်း - output ကို BiColor Tunable DMX LED မြင့်မားသောပျော့အလင်းရောင်လ်တာလ်တာ Long Throw Panel ကို LED အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သောပျံ့နှံ့မှုနှင့် CCN အကွာအဝေးမှ 2700 K မှ 6500 K. အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအဖြူရောင်အလင်းရောင်။ သင်အဖြူရောင် (အနည်းဆုံးနှင်းကျသည့်နေရာများ၌) ပိုမိုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောအခါ၌ CineLight 480 စူပါ Quad ဖြူစင်သောအဖြူရောင်အလင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်ရှိမှုကြောင့်၎င်းသည် ballast သို့မဟုတ် power supply အတွက်မလိုအပ်သော4CineLight 120 နှင့်ညီမျှသောအလင်းထွက်ရှိမှုနှင့်အတူဈေးကွက်ထဲတွင်အကြီးဆုံးနှင့်အင်အားအရှိဆုံး luminaire ဖြစ်စေသည်။ သငျသညျ "ကယ်လိုရီကောင်တာ" အလွန်အကျွံပါဝါစားသုံးမှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့ - LED နည်းပညာကိုဆိုလိုသည်ဤ 835w ကိုသာအသုံးပြုသည်ကိုဆိုလိုသည်! ရှေ့ဆက်သွား - ထို cookies များကို Santa အတွက်ထားခဲ့ပါ။
ခရစ်စမတ်၏ 4th နေ့တွင် AJA Ki Pro ကို GOတစ် ဦး ခရီးဆောင် Multi- ရုပ်သံလိုင်း H.264 တစ်ပြိုင်နက်တည်း 4-channel များအထိကမ်းလှမ်းသောအသံဖမ်းစက် HD မလိုအပ်သောအသံသွင်းနိုင်သည့် USB drive များမှ SD မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ အဘယ်ကြောင့်သူသည်ဤအံ့ show ခြင်းအဖြစ်ပြသမှာမဟုတ်ဘူး? ဒီအသံဖမ်းစက်ကကင်မရာတွေအပါအ ၀ င်နောက်ဆုံးဗွီဒီယိုရင်းမြစ်တွေကိုဆက်သွယ်ပေးတယ်။ The AJA Ki Pro ကို GO သွင်းအားစုတစ်ခုစီတိုင်းတွင် AJA ၏အရည်အသွေးမြင့်မားစွာနှိမ်နင်းနိုင်သည့်အရာများပါ ၀ င်သည်။ သို့မှသာတိုးတက်သောအသံသွင်းခြင်းကို interlaced inputs များမှပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် portable ဖြစ်စေ၊ rack-mountable 2RU မြင့်မားသောအတိုင်းအတာဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို၎င်းတွင်အသုံးပြုသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ - စန်တာမှာဒီအဝတ်အစားကိုဝတ်ထားတာပဲ။
ခရစ်စမတ်၏ 5th နေ့တွင်, Blackmagic ဒီဇိုင်း's HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR။ ဟိုဟိုဟို ဤထုတ်ကုန်သည် HyperDeck ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအသစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် အာကာသချွေတာသော H.265 ဖိုင်များ၊ ရွေးချယ်နိုင်သောအတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှု၊ 3D LUTs၊ ဇာတိ 8K နှင့် HDR အထောက်အပံ့တို့ကဲ့သို့သောတီထွင်မှုများ! The HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR H.8 တွင်မူလ 265K ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိပြီးအသုံးပြုသူအားသိုလှောင်စရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ပုံအရည်အသွေးတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့်ရိုးရာထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်ပြီး HyperDeck Extreme 8K HDR ၏ကြီးမားသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည်သင်၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ကုန်းပတ်ချိန်ညှိမှုများအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်စေရန်သေချာစေသည်။ HyperDeck Extreme သည်မျိုးဆက်သစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စာရင်းပြုစုရန်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ချက်များအလွန်များလွန်းသည်။ Santa ကကုန်သွားပြီ။ စုံစမ်းသည်!!!
ခရစ်စမတ်၏ 6th နေ့တွင် Panasonic က AJ-CX4000, B4 မှန်ဘီလူးနှင့်အတူကင်မရာကို mount ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အသုံးပြုသောပုံမှန်လဲလှယ်နိုင်သောမှန်ဘီလူးကင်မရာအသံဖမ်းစက်။ ကင်မရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်စန်တာကအရှိန်မပျက်ဘူး။ The Panasonic က AJ-CX4000 အရွယ်အစားကြီးမားသည့် 11MP ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့် 4K (UHD) ရုပ်ပုံများကိုအလျားလိုက် resolution ဖြင့် (HDR ဖြင့် BT.2000 & BT.2100 နှင့်လိုက်လျောညီထွေသော) HDN တီဗီလိုင်းများဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံနှင့် 2020-bit အသံ! ငါ့စကားကိုကြားခဲ့လား ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းလုပ်ခဲ့တာပါ၊ ရုပ်သံလိုင်းလေးခုပါသော 24-bit LPCM အသံဖမ်းသည်မြန်နှုန်းမြင့်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်မြန်ဆန်သော“ ExpressP24” ကဒ်သို့မဟုတ်မီဒီယာမှတ်တမ်းတင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သောအနိမ့်အပြေးကုန်ကျစရိတ်“ microP2” ကဒ် (SDXC မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်) နှင့်အတူလိုက်ပါ။ ၎င်းသည်“ AVC-ULTRA” CODEC ၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုလည်းထောက်ခံသည်။HD) သမားရိုးကျ P2HD စီးရီးကနေ။ UHD 60p / 50p 10-bit 4: 2: 2G-SDI output မှတစ်ဆင့် 12 output ကိုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သော့ခတ်ယန္တရား (1000BASE-T လိုက်ဖက်တဲ့) တပ်ဆင်ထားသည့် LAN terminal သည် NDI | HX ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကင်မရာထိန်းချုပ်ခြင်းကို IP ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Panasonic ၏ဝေးလံသောကင်မရာနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ခြင်း / ဖြန့်ဝေခြင်းစနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ တကယ်ပဲအားလပ်ရက်ပျော်မွေ့ခြင်း!
ခရစ်စမတ်၏ 7th နေ့တွင် NewTek TriCaster Mini 4K။ ဤကိရိယာသည်ပရိသတ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အသေးစိတ်မကျမှုတို့ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောစွဲငြိဖွယ်အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကိုတင်ပြနိုင်သည်။ တဖန်သင်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပါတယ်; သေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသည် set up နှင့်ရ5မိနစ်အတွင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဤထုတ်ကုန်၏4POE ethernet ports နှင့် 8 တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုသွင်းမှုများကြောင့်အသုံးပြုသူသည် 4K UHD အထိလမ်းစဉ်များ၊ အစီအစဉ်များ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ Plug-n-Play ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် NDI®အဘယ်သူမျှမပြင်ပကွန်ရက်များမလိုအပ်ပါ။ သင့် NDI ကိုထည့်ပါ® device နှင့်၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ။ ထိုအခါ2PoE input ကို module တွေတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ HDMI ချက်ချင်း NDI အဖြစ် devices များ® ရင်းမြစ်များ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်း - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများသို့ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်၍ စီးဆင်းနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ကင်မရာနှစ်လုံးကိုသိမ်းဆည်းပါ iPhone ကို®, သင်သည်သင်၏လမ်းပေါ်မှာပါပဲ။ The NewTek TriCaster Mini 4K ဗွီဒီယိုဘောင်တိုင်းကိုအနုပညာလက်ရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Santa ကိုဖမ်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ - ဒါကလုံးဝမဟုတ်ဘူး - သင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့စာရင်းထဲမှာပါလိမ့်မယ်။
ခရစ်စမတ်၏ 8th နေ့ကမှအခြားတစ်ခု Blackmagic ဒီဇိုင်း - ထို ATEM Miniတစ်ဦး တန်ဖိုးနည်းသက်သာသည့်ကင်မရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်သည် YouTube သို့တိုက်ရိုက်လွှင့်ရန်သို့မဟုတ် Skype ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးတင်ဆက်မှုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်စုံကင်မရာထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ATEM Mini, သင်သည်4အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုကင်မရာထည့်သွင်းမှုများအကြားတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သင် PowerPoint slides များကိုတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်း console တစ်ခုထည့်ရန်ကွန်ပျူတာနှင့်ပင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ATEM Mini ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည်စစ်မှန်သောထုတ်လွှင့်မှုပုံစံရောနှောခြင်းသက်ရောက်မှု switching ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Live stream လုပ်ရန် ATEM Mini တွင်ဝက်ဘ်ကင်မရာကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သော USB output ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ဗီဒီယိုဆော့ဖ်ဝဲကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် HDMI ပရိုဂျက်တာအတွက်ဗွီဒီယိုထုတ်သည်။ Santa ကသူပြောင်းရတာလွယ်ကူအောင်မယုံဘူး! ဒီတော့အခုပြောင်းပါ။
ခရစ်စမတ်၏ 9th နေ့တွင်, iZotope တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပွဲရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်နောက်ဆုံးအသံရောနှောမှုကိုဖြည့်ပေးသောရောစပ်စက်များအတွက်ထုတ်လုပ်သည့် Pro Tools AudioSuite plugin ကိရိယာတစ်ခု အစီအစဉ်များ။ စန်တာသည်သူတို့နှင့်အတူမှန်ကန်သည် - သူတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကာလအတွက်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောသောအခါ။ iZotope တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပွဲ ဒိုင်ယာလော့မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ reverberant ဇာတ်ကောင်ကိုအလိုအလျောက်လေ့လာရန်နှင့်လိုက်ဖက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ချောမွေ့ပြီးစည်းလုံးညီညွတ်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ဖန်တီးရန်အတွက် lavalier, boom mics နှင့် ADR တို့၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်သည်။ The iZotope တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပွဲ ထူးခြားချက်များတွင်: lavalier mics များကို boom များနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအသံနှင့် ADR ကိုကိုက်ညီခြင်း၊ ဘာသာစကားနှင့်မျိုးစုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ဒေသတွင်းရှိအသံနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်အသံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သင့်ပရိသတ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအဆင်ပြေပြေပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ စန်တာချိတ်နေပြီ
ခရစ်စမတ်၏ 10th နေ့တွင် Magewell's HDMI 4K Plus Pro ကိုပြောင်းပါ။ မွေးစားခြင်း NewTek'' s ကိုမူပိုင်-အခမဲ့ NDI® encoding နှင့် transmission အတွက် protocol, Pro Convert မိသားစုသည် video signal များကဲ့သို့သောအလွယ်တကူနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောင်းလဲနိုင်သည် HDMI နှင့် SDI NDI စီးထဲသို့။ ဤ NDI စီးဆင်းမှုများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးမခွဲခြားဘဲ NDI နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဆော့ဝဲလ်နှင့်စနစ်အားလုံးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ အနိမ့်အမြင့်၊ IP အခြေပြုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံများသည်ရိုးရှင်းသော live ထုတ်လုပ်မှုထက်သာလွန်သည်။ စန်တာအရမ်းသဘောကျသွားတယ် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောယူနစ်သည် 117.5mm ၏သေးငယ်သောအရွယ်အစားရှိပြီး 66.7mm (4.63 မှ 2.63”) နှင့် 23.4mm (0.92”) ထူသော 234g သာလေးသည်။ အလွန်သေးငယ်သော, ထို converter ကိုထောက်ခံပါတယ် HDMI 2.0: 4: 60:4မှ 4K သို့4အချက်ပြအချက်အလက်များသည် 4Kp60 4: 2:2သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ အံ့သြစရာကိုကြည့်ပါ HDMI 4K Plus Pro ကိုပြောင်းပါ သင်ကိုယ်တိုင်! မင်းယုံလိမ့်မယ်
ခရစ်စမတ်၏ 11th နေ့တွင် Adobe Creative Residencyလာမည့်လာမည့်အနုပညာရှင်များ၏အိပ်မက်ပုံသဏ္buildingာန်ကိုတည်ဆောက်ရန်အာရုံစူးစိုက်ရန်တစ်နှစ်ကြာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Adobe Creative Residents များသည်အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအကြံပေးများနှင့်လျော်ကြေးပေးခြင်းအထောက်အထားများနှင့်အတူရယူနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်နေထိုင်သူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စဉ်များ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုလမ်းတစ်လျှောက်ရှိလူထုများနှင့်မျှဝေစဉ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ နေထိုင်သူများကိုလစာအပြည့်အစုံ၊ ကျန်းမာရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ လမ်းညွှန်မှုများ၊ Adobe ဆော့ဖ်ဝဲများရယူခြင်း၊ စကားပြောဆိုခွင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အခြားစီမံကိန်းအတွက်အထောက်အပံ့များဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ဝိုး၊ စဲန်တာကမစောင့်ပါနဲ့။ ဒီမှာကျင့်သုံးပါ
ခရစ်စမတ်၏ ၁၂ ရက်မြောက်နေ့တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှမည်သူမဆိုအလိုအပ်ဆုံးသောလက်ဆောင်သည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊ 2020 NAB ပြရန်။ မင်္ဂလာပါ။ အားလပ်ရက်ရာသီကိုရပ်ပါ ငါ ခရစ်စမတ်ဆယ့်နှစ်ရက်မြောက်နေ့သည်ဇန်နဝါရီလ5ဖြစ်သည်thဒါပေမယ့်အဆုံးသတ်ပါတကား! ဖန်ဆင်းခြင်းမှဖြန့်ဖြူးခြင်းအထိ၊ စားသုံးရန်၊ NAB ပြရန် ကမ္ဘာကိုအမြော်အမြင်ရှိရှိပါဝင်သူများသည်အကြောင်းအရာများကိုအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းများဖြင့်အသက်ဝင်စေရန်စုဝေးရာနေရာဖြစ်သည်။ မီဒီယာ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာတို့ကိုမည်သူမျှမသိ NAB ပြရန် နှင့်ဤဇာတ်လမ်းပြောပြနှင့်ပတ်သက်။ အလေးအနက်သောသူတို့အဘို့နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည် Las Vegas တွင်လေးရက်ကြာတွေ့ဆုံပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုလေ့လာရန်၊ ဗဟုသုတများရရှိရန်၊ ရှေ့ပြေးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ရုံများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တို့အတွက်လေးရက်ကြာဆွေးနွေးကြပါစို့။ ထိုမျှမက - NAB တနင်္ဂနွေထည့်သွင်းရန်တိုးချဲ့နေသည်! မှန်ပါသည်၊ ယခု မှစ၍ တနင်္ဂနွေနေ့သည်တနင်္လာနေ့ဖြစ်သည်။ NAB သည်ပြပွဲသစ်ရက်နှင့်နာရီအသစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြေငြာရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် 2020 NAB ပြရန်။ ထွက်ခွာသည် 2020 NAB ပြရန် အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုမြင်ရပါမည်အကြောင်း၊ Xပြီလ 18 - 22, 2020 (ပြပွဲAprilပြီလ 19 - 22) ။
လက်ဆောင် ၁၂ ခု၊ ခရစ္စမတ်၏ ၁၂ ရက်အတွက်တစ်ခုစီ။ Lords-a-Leaping၊ Ladies Dancing မရှိ၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သစ်အယ်သီးကိုပွင့်လင်းတဲ့မီးထဲကိုထည့်ပြီးအရသာရှိအောင်လုပ်ပါ။ ခရစ်စမတ်နဲ့တော်တော်တူနေပြီ။ အရာတစ်ခုတော့၊ ငါကြင်နာချင်ပါတယ်, ငါ outta မျက်မှောက်မသွားမီ - သင်တို့ရှိသမျှနှင့်ကောင်းသောရှုထောင့်အားလုံးကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်!
နဖူးစည်းစာတန်းများတွင်အသုံးပြုသောအိုင်ကွန်များသည် Freepik မှပြုလုပ်သည် www.flaticon.com
2015 Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida CES2017 တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို MStar ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို	2019-12-14
ယခင်: အသစ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာသဖြစ်သောကျောင်းမှ Fight သည် Sony FS7 အားဘဝအသစ်ငှားရမ်းရန် Shogun7HDR မော်နီတာ / အသံဖမ်းစက်ကိုအသုံးပြုသည်။
နောက်တစ်ခု: MOME Broadcasting နှင့် IT Support Engineer